ပုံနှိပ်ဆားကစ်, printed wiring, printed board, printed circuit board (PCB), printed wiring board(PWB), rigid printed board,6layer, 15 kinds of boards, the purple solder. panel together. - တရုတ် circuitပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး��ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့��ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်prPCBed ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့iPWBoarတင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့ringအလွှာd(PWBပျဉ်ပြားမျိုးd အဆိုပါခရမ်းရောင်ဂဟေဆက်5 အတူတူ panel ကs, the purple solder. panel together. ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
6 အတူတူအများအပြားမျိုး panel ကိုထပ်ထား
6 အများအပြား codes တွေကိုထပ်ထား
ခရမ်းရောင်နှင့်အတူကြီးမားသော panel ကိုခုခံတွန်းလှန်
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, တဦးတည်းကြီးတွေ panel ကိုအရွယ်အစား 280 * 320mm, panel ကအဖြစ်သင်္ဘော, ဖျင်အထူ 1.6mm - ကြေးနီအတွင်းစိတ် / ပြင် 35 မိုက်ခရွန်, ကြေးနီအလွှာအရေအတွက်ဖြစ်ပါသည် 6, ul မှတ်သားခြင်းနှင့်အတည်ပြု, စံ IPC-A-600 Class ကိုလွှတ်ပေးရန် 2, codes တွေကို panel ကိုများစွာသောမျိုးအတူတူရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်တိုင်းကုဒ်ကောင်းသောဖြစ်သင့်. ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းထုတ် routing တချို့အချိန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ် panel ကိုမှဖောက်သည်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယျတငျနိုငျ. အဆိုပါနည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေ multilayer ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်, တစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်, နှင့်ခရမ်းရောင်စံ soldermask အရောင်မဟုတ်ပါဘူး. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည် လျှပ်စစ် စက်ကရိယာ. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် PCB2အလွှာ PCB FR4 Tg135 peelable မျက်နှာဖုံးနျ Standard IPC 2
အဖြူရောင်မှင် PCB ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB ထည်လျင်မြန်စွာပြန်လာအကြီးစားထုတ်လုပ်မှုမှအသေးစားအလတ်စားဆောက်
2 အလွှာ PCB အမြင့် TG ဘုတ်အဖွဲ့က Black မှင် 2.36mm အထူဘုတ်အဖွဲ့ Quickturn PCB FR4 TG180 ပစ္စည်း HASL အခမဲ့ Fast Delivery ဦးဆောင်လမ်းပြ
4 အလွှာရှန်ကျန်းအတွက်စံ HASL LF Multilayer တရုတ်စက်ရုံ